10 dhibaato oo caan ku ah iPhone 6 iyo 6s iyo sida loo xaliyo | Wararka IPhone
10 dhibaatooyin caadi ah oo ka jira iPhone 6 iyo sida loo xaliyo
Carmen rodriguez | | Wararka IPhone, macruufka 8, iPhone 6, iPhone 6 Plus
Dhamaanteen waan ognahay dhibaatooyinka iOS 8-da cusub uu bixinayo waxaanan sugeynaa cusbooneysiinta sida biyaha May, laakiin waa inaan ka warqabnaa tan cusbooneysiintu ma hagaajin doonto dhibaatooyinka oo dhan kaas oo aan ka heli karno terminaalkeena.
Liiska Dhibaatooyinka iPhone 6 Waa mid ballaaran (sidoo kale waa u ansax iPhone 6s), laakiin kuwa ugu caansan waa kuwa aan falanqeyneyno waxaanna soo bandhigi doonnaa hab aan ku hagaajin karno inta aan sugeyno cusbooneysiinta, tan ama tan xigta, taas oo ah toos loo hagaajiyey
Hadaad leedahay a iPhone 7, ha moogaan waa maxay cilladahaaga ugu badan iyo sidee lagu xalliyaa
1 Sida loo xaliyo iPhone 6 dhibaatooyinka batteriga
2 Sida loo xaliyo dhibaatooyinka isku xirka WiFi
3 Sida loo xaliyo dhibaatooyinka iPhone 6 ee Bluetooth
4 Sida loo hagaajiyo cilladaha la xiriira barnaamijka
5 Sida loo hagaajiyo waxqabadka
6 Saxitaanka Jams ee Muuqaalka Muuqaalka iyo Muuqaalka Sawirka
7 Sida loo xaliyo dhibaatooyinka iMessage
8 Sida looga fogaado dib u soo kabashada aan kala sooca lahayn
9 Sida loo hagaajiyo jawaabta goor dambe
10 Sida looga fogaado dhibaatooyinka xogta mobilada
11 Dhibaatooyinka goobta: sida loo sii daayo xusuusta
12 Dhibaatooyinka codka
13 Haddii aysan waxba shaqeyn
Sida loo xaliyo iPhone 6 dhibaatooyinka batteriga
Dhammaan cusbooneysiinta waxay saameyn xun ku leeyihiin nolosha batteriga ee terminal-ka iyo iOS 8 kama hor istaagin. Waa inaan aragno waxoogaa aragti guud ah oo ku saabsan dhibaatadan oo aan fahamno in isticmaalka batteriga sidoo kale yahay go'aamisay qaabka isticmaalka in aan isaga siinno, tani waa sababta aanan ugu maleyneynin in Apple ay sameyso horumar maleh arrintan la xiriirta ee nidaamka cusub ee wararka.
Waxaa jira waxyaabo badan oo aan kugula talin karno, laakiin waxa ugu fiican ayaa ah taas mayrooyinka las talooyin aan horay u soo jeedinay qoraal hore iyo dooro midka kuugu habboon baahiyahaaga oo isticmaal.
Sida loo xaliyo dhibaatooyinka isku xirka WiFi
Labadii sano ee la soo dhaafay, guddiyada wada hadalka ee Apple waxaa ka buuxay cabashooyin ku saabsan WiFi, laga bilaabo calaamadaha la khafiifiyey illaa isku xirnaanta aan degganeyn. Cabashooyinkan kuma aysan joogsanin macruufka 8. In kasta oo aysan jirin xal la hubo waxaa jira waxyaabo yar oo la isku dayo ka hor inta aan tallaabada adag la qaadin.
Xulashada ugu horeysa waa dib udajinta goobaha shabakada: goobaha > General > Dib u dejinta > Dib u deji dejimaha shabakadda. Waxaad u baahan doontaa inaad dib u gasho lambarka sirta ah si aad u gasho WiFi.
Beddelka labaad ayaa ah in la damiyo WiFi-ga nidaamka. Wixii loogu talagalay: goobaha > Privacy > Goobta > Adeegyada nidaamka. Dami Xiriirka Shabakada WiFi y soo noqosho telefoonka. Mar haddii dambi lagaa galo waxaa fursad ah in WiFi uu si caadi ah u shaqeynayo.
Haddii dhibaatooyinkaaga de hagaagsan la iTunes, booqo hage si loo xaliyo dhibaatadan.
Sida loo xaliyo dhibaatooyinka iPhone 6 ee Bluetooth
Oddly filan, tani waa arrin leh cabashooyin badan, gaar ahaan kuwa isticmaala hawsha si ay ula xiriiraan baabuur gacmo-la'aan. Haa Waayahay ma jiro hal-cabbir-ku-habboon-dhan xal sidoo kale Gawaarida gacanta iyo astaamaha, haddii aan hagaajin karno isku xirnaanta macruufka 8.
Raac jidka: goobaha > General > Dib u dejinta oo halkan ka sii wad Dejinta dib u dejinta. Dhamaan dejimaha la keydiyey ayaa lumaya, laakiin waxay umuuqdaan inay hagaajinayaan arrimaha isticmaala badan.
Macluumaad dheeraad ah: Sidee dib loogu soo celiyaa xiriirka Bluetooth-ka ee gaariga ka dib markii la cusbooneysiiyey iOS 8.0.2
Sida loo hagaajiyo cilladaha la xiriira barnaamijka
Cabashooyinka iyo walwalka ayaa sidoo kale laga maqlay codsiyada ku jira nidaamka cusub ee hawlgalka barafoobay ama iska xir. Shakhsiyan, barnaamijka boostada asalka ah wuxuu xirmaa marwalba oo aan isku dayo inaan ka jawaabo fariin. Marka anigu layaabi maayo markay barnaamijyada dhinac saddexaad sameeyaan.
Barnaamijyada asaliga ah ayaa ku xanuunsan doona la qabsashada iyo hagaajinta cilladaha, laakiin kuwa horumariya-saddexaad ayaa noqon doona masuuliyada horumariye kasta, Apple ma caawin doonto ama ma faragalin doonto, tanna waan ku raacsanahay shirkadda.
Sidaa darteed, waxa kaliya ee haray in la sameeyo ayaa ah barnaamijyadooda la socodsiiya. Kuwa caajiska ah, xusuusnow inaad ikhtiyaar u leedahay inaad dhaqaajiso cusbooneysiinta otomaatiga ah, tan waa inaad raacdaa wadada: goobaha > iTunes Store iyo App Store iyo qaybta Soo degsasho otomaatig ahHaa, waa inaad dhaqaajisaa ikhtiyaarka Cusbooneysiinta.
Sida loo hagaajiyo waxqabadka
In kastoo khibradayada aan la leenahay macruufka 8 ee iPhone 6 ay fiicneyd oo dhakhso leh, kuwa kale ayaa soo maray a gaabis aan kala sooc lahayn iyo xoogaa gaabis ah on iPhone cusub. In kasta oo tani aysan ahayn arrin xilligan la joogo, waxaan lahaan karnaa arrimo waxqabadka ah toddobaadyada soo socda.
Waxaa jira habab qaar oo lagu dedejiyo waxqabadka iPhone 6 oo waxtar yeelan kara, asal ahaan waa kuwo yaree saameynta laga bilaabo macruufka 8, qaar ayaa kala ah;
Ka saar saamaynta isku-darka adoo isticmaalaya dariiqa: goobaha > General > Gaaritaan > Yaree Dhaqdhaqaaqa. Fiiri in la dhigay «Si»Si aad u saarto saameynta, haddii aysan ahayn, tag oo guji batoonka Yaree Dhaqdhaqaaqa si ay cagaar uga dhigto.
Ka takhalus hufnaanta, u tag: goobaha > General > Gaaritaan > Kordhin isbarbar dhiga > Yaree Hufnaanta oo dhaqaajiso shaqadan.
Saxitaanka Jams ee Muuqaalka Muuqaalka iyo Muuqaalka Sawirka
IPhone 6 wuu joogaa ku xayiran aragtida muuqaalka ka dib markii uu u leexday dhinaca toosan. Tani waa dhibaato weyn, gaar ahaan marka la isticmaalayo barnaamijka kamaradda. Xal ma jiro, laakiin waxaa jira band-aid.
Markaad isticmaaleyso isla aragtida aragtida, qufulan jihaynta telefoonka Meesha xarunta kontoroolka.
Sida loo xaliyo dhibaatooyinka iMessage
Dhibaatooyinka qaarkood waa awood la'aanta in la diro farriimo cusub, ku calaamadee kuwa cusub sida akhriska, ama farriimaha saacadaha soo daaha. Xaaladahaas jira waxaa jira xoogaa hagaajin ah oo aan tijaabin karno.
Kaji oo dhaqaaji iMessage (maskaxda ku hay in ay leedahay kharash)
Dib udhiska boosteejada.
Dib u deji Qalabaynta network mobile: goobaha > General > Dib u dejinta > Dib u deji dejimaha shabakadda. Telefoonka ayaa dib u bilaabi doona oo shabakadaha WiFi ee kaydsan ayaa lumaya.
Sida looga fogaado dib u soo kabashada aan kala sooca lahayn
Dadka isticmaala qaarkood reboots aan kala sooc lahayn (Memory leaks) on iPhone 6. Ciladan ayaa horey uga dhacday iPhone 5, 5s iyo iPad Mini, Air iyo Retina. In kasta oo aysan u dhicin sida ugu badan ee ay u dhici jirtay, haddana wali waxay ku dhacdaa dadka isticmaala qaarkood.
In kasta oo aysan jirin dawo joogto ah, ayaa jira xoogaa talo ah:
Dib u Bilow iPhone 6.
Dib udajinta guud: goobaha > General > Dib u dejinta > Dejinta dib u dejinta.
Koronto barnaamijyadi ugu dambeeyay
Sug iOS 8.1.
Sida loo hagaajiyo jawaabta goor dambe
Mararka qaarkood a dib-u-dhac yar oo ku saabsan kumbuyuutarka iPhone 6 markii la qorayo emayl ama farriin. Ma jiro dawo rasmi ah oo tan la mid ah, laakiin waad dib u dejin kartaa dhammaan dejimaha: goobaha > General > Dib u dejinta > Dejinta dib u dejinta.
Sida looga fogaado dhibaatooyinka xogta mobilada
Xidhiidhyo gaabis ah, maqnaanshaha guud ee isku xirnaanta iyo dhibaatooyinka kale ee la midka ah iyo ku saabsan isku xirnaanta wadaha ayaa la soo sheegay. In la isku dayo in la saxo dhibaatooyinkaas;
Dib udhiska iPhone 6.
Ka jar xogta moobiilka: goobaha > Macluumaadka Mobiles, dami xogta moobaylka iyo xulashada 4G.
Dhaqaaq qaabka diyaaradda, sug 30 ilbidhiqsi oo ka fur mar kale si aad u kiciso raadinta shabakadaha mobilada.
Dhibaatooyinka goobta: sida loo sii daayo xusuusta
Sida loo sii daayo boos on my iPhone
Haddii mobiilku joogsaday xusuus la'aan si aad u keydiso codsiyo dheeri ah, sawirro ama wixii aad rabto, ha moogaan kuwan talooyin si aad u sii dayso booska on your iPhone.
Dhibaatooyinka codka ee IPhone
Haddii taleefankaaga iPhone aad u deggan yahay ama aan si toos ah loo maqal, waxaa laga yaabaa inaad dhibaato la xiriirto qofka ku hadla. Xaaladdaas, halkan waxaan ku tusaynaa sababaha iyo xalka suurtagalka ah ee kuwaas Dhibaatooyinka codka ee iPhone.
Haddii aysan waxba shaqeyn
Soo celi iPhone
Haddii midkoodna uusan shaqeynin oo aad xal u heli weydo aaladda Apple, waxaan kugula talinayaa laba siyaabood. Marka hore, soo qabso iPhone-ka oo u qaado a Barxadda Genius ka socota Apple Store. Kuwa aan awoodin ama aan rabin inay aadaan, waa inay tixgeliyaan sameynta rdejinta warshadda.
Kuwan keebaa Dhibaatooyinka iPhone 6 ma ku xanuunsatay? Ma jiraan kuwo aan liiska ku jirin? Noo sheeg cayayaanka uu iPhone 6 ama 6s uu lahaa iyo sidaad u xalisay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 8 » 10 dhibaatooyin caadi ah oo ka jira iPhone 6 iyo sida loo xaliyo
100 faallooyin, ka tag taada
guud ahaan ha isticmaalin taleefanka ama ha ka saarin wax kasta oo ku cusub iOS 7
Ku jawaab gabrielort
Qof ayaa dhibaato ku qabay taleefanka 6 oo lagu daray kaamiro, aniga tayda ayuu sawir ka qaadayaa waana daruuro. Waxay aniga igu dhacdaa kaliya kamaradda hore ee 12mpx. Waxaan ubaahanahay CAAWIMO. WAAYO ACA EE URUGUAY Waxay U Muuqataa IN AAN LAHAYN LACAG LA'AAN SIDA AY UGU SOO SHEEGEEN Aafo
Muxuu yahay shit post.
Dib u soo celi wax walba, haddii aysan kuu shaqeynaynin… xal ma jiro.
Muddo 1 bil gudaheed ah ayaad markale ku daabici doontaa cinwaan kale.
Ku jawaab Xabi
Wax la mid ah ayaa igu dhacay aniga oo ahaa in aan nadiifiyo aaladda muraayadaha indhaha .. pfff Waxaan rajeynayaa inay taasi tahay uun! nasiib!
Carmen, fadlan fiiro gaar ah u yeelo markii aad qoraysid higgaadinta iyo qoraalka iyo isku xirnaantiisa. Waxaan soo xiganayaa qaar ka mid ah khaladaadka lagu arko indhaha oo qaawan "miyir qabo" waa miyir, "waa inaan aragnaa aragti ballaadhan" Sidee ayaad u arki doontaa aragti ballaadhan? Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxay noqoneysaa in la yeesho aragti balaaran, "tani waa sababta aanan u aaminsanahay in Apple wax horumar ah sameyn doonin" waxay noqon laheyd anigu ma aaminsani in Apple wax horumar ah sameyn doonto maxaa yeelay hadii aysan wax horumar ah sameyn, horumar ayey sameyn laheyd. Dhinaca kale, qoraalkan waa lagu soo noqnoqday, waa isku mid isla qoraaga isla markaana sidoo kale waa wax aan faa'iido lahayn tan iyo markii waxaas oo dhami ay horeyba u dhaheen in la sheego, sida ay horay u yiraahdeen ka hor soo celinta iyo haddii kale ma jiraan wax intaa ka badan.
Ragga, haddii aad kireysato tifaftirayaal, fadlan la soco waxa ay qorayaan oo, ugu yaraan, yaqaana oo garanayaan sida wax loogu qoro afkooda hooyo.
Qoraalkani waa isku-dubbarid (sida ku cad cinwaanka iyo hoggaaminta) iyo muujinta iyo naxwaha, waxaan kaliya kuu sheegi doonaa inaad akhrido faalladaada mar labaad, oo ay ka buuxaan qaladaad higaad iyo lahjad maqnaansho ah intaadan bilaabin inaad dhaleecayso dadka kale.
Haddii aadan haysan wax aad sameysid, naftaada u hel hiwaayad laakiin jooji inaad dhahdo wax aan micno lahayn, habkaas, Isbaanish, inkasta oo uu yahay luuqadeyda labaad, maahan afkayga hooyo, markaa waxaad sameysay mid dhameystiran.
Ku jawaab Carmen Rodriguez
Muddo dheer ayaan aqriste u ahaa boggan, Carmen marwalba waa la dhaleeceeyaa, mararka qaar sababo badan iyo kuwa kale oo yarna, iga cafi inaan kuu sheego Damian, iyo ixtiraam mudan oo dhan, tani waxay raadineysaa wax aan macquul aheyn ... inbadan ayaad baratameysay markan, wax walboo aad rabto inaad raacdo «qaabka cayda» ha isku dayin inaad iska dhigto, maxaa yeelay waxay muujineysaa inaadan haysan fikrad **** ah inaad ku hadasho
Carmen Wanaagsan! Kuwani waa kuwa aan haysan wax ay qabtaan oo akhriyaan si ay u arkaan waxa ay ku dhaleeceynayaan…. Salaan ka dib, ku sii soco sidan, adoo na wargelinaya ama uruurinaya, maaddaama aynaan wax walba akhrin karin oo ay ku habboon tahay in badan oo naga mid ah.
Jawaab ku bixi Marcelo Pepe
Afkaaga ayaa sabab ka buuxa Damien hadaad talo siiso la joog.
Dariiqa Damian, maahan "miyir qabo"; waa "miyir-qab", sida uu Carmen si fiican u qoray. Inta kale, waa hagaag, isla wixii uu Carmen kuu sheego; Ma kugu soo dhacday inaad dib u eegto faalladaada? Hal tilde ma dhigin (dhowrna way maqan yihiin). Sikastaba, ha siinin casharo higaada ah hadaadan xitaa aqoon sida loo qoro si sax ah.
Damien: damiirka iyo damiirku waxay ka yimaadaan Latin cum scio, waqtiga freíd ereyga damiirku waa caan oo waa kan kaliya ee kooxda sc ay lumiso.
Errata Freud ma uusan shiilin
Damien, halkan waxaad u galeysaa inaad soo bandhigto dhibaatooyinka kaa haysta taleefannada iPhone-ka, oo aanad soo bandhigin damaca nin kibir badan, oo meesha ku qaldan.
hahaha, sifiican oo weyn ... wax xun dadkale uga dhaho khaladaadka iyo wixii ka sareeya taas, adiga oo dul dhigaya khaladaadka adiga hahaha waa doqon
Runta ayaa ah in sidaan lagu arkay aad sax tahay, waxaan u maleynayaa inaan nahay masochists oo waliba leh iimaan indha la 'in wax walba la hagaajin doono, laakiin haye, dhibaatooyinkani waxay ku dhacaan xitaa qoysaska ugu fiican iyo, kiiskan, dhammaan soo saarayaasha si ka weyn ama ka yar.
Waan la qabsaday iPhone-ka mana badalo inkasta oo aan qabo dhibaatooyin ka mid ah kuwaan kor ku soo koobayo….
Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga iyo ixtiraamkaaga, runti waa hawo yar oo nadiif ah.
Dhamaanteen waan ognahay in noocyada ugu horeeya ee nooc kasta oo ios iyo osx ay keenaan cayayaanka.
Taasi waxay hagaajinayaan waqti ka dib, marka la eego macruufka haddii ay tahay in la cusbooneysiiyo iyadoo loo eegayo bixitaanka osx joogitaanka xasilloonida ugu dambeysa illaa midka cusub uu ka xasilloon yahay, waxaan u leeyahay yosemite waa marka ay timaaddo.
Sida Carmen ay tiraahdo, ma jiraan wax kaamil ah ama qofna kaamil ah, had iyo jeer waxay leeyihiin ikhtiyaar ah inay aadaan madal kale haddii ay u maleynayaan inay wax ka sii wanaagsan yihiin.
Ku jawaab abel
Sidee qosol badan tahay in wax walboo aad magacowdo aysan igu dhicin taleefankayga iphone 6 oo lagu daray, aniga ayaa igu habboon
Ku jawaab vndiesel
6 plus ayaa sifiican aniga ila shaqeynaya, laakiin aragti kale had iyo jeer waa mid waxtar leh oo had iyo jeer waxaa jira wax kaa baxsan kara oo xitaa ka sii badan marka aad ku lug yeelatid waxyaabo kale oo aan taleefan aheyn, boostada waa la qadarinayaa sidoo kale kuwa kale iyo wararka, waxa ku jira iyo taariikhda, maalin kasta waxaan ku soo booqdaa dhowr jeer si aan u arko haddii aad qoraallo cusub dhigayso iyo in kasta oo aan sannado badan la joogay Apple haddana waxaad mar walba i bartaa wax adiga iyo boggaga saaxiibkaba ah oo la xiriira mac iyo ipad.
wixii saxda ahaa waxay ahayd cinwaan looga dhigay "10 dhibaatooyin caadi ah oo ku saabsan IOS 8"
Ku jawaab fgwgf
Eeg waxaan ku shaqeeyaa taleefannada gacanta waxaana badanaa jira dhibaatooyin aad u tiro badan oo leh iphone 6 iyo 6 oo lagu daray hadda sida muuqata waxaan aaminsanahay inay bilaabeen iyaga oo aan tijaabin wax soo saarkooda si fiican maadaama ay leedahay khaladaad badan oo kaliya lagu xalliyo reboots, laakiin badanaa waxay dhacdaa mar labaad iyo runta kuma qaadan doonno dib u bilaabid
Ku jawaab maya
Waxaan hayaa iphone 6 oo lagu daray macruufka 8.1 iyo JAILBREAK waxayna u egtahay tallaal, aad ayaan ugu faraxsanahay iibsashada sidoo kale waa inaan dhahaa kahor intaanan haysan iphone 4 oo xabsi ah mana jiro midab batteriga oo waqti dheer sii jiraya, wifi si dhakhso leh ayuu u socdaa xittaa kamana sheekayn doono kulamada mar dambe umana baahni inaan noqdo sida Shiine oo kale oo shaashadda eegaya, wuxuu si fiican ugu habboon yahay jeebadaha surwaalkayga mooyee inaad xidhan tahay surwaal caato ah oo adag maahan qaabkeyga oo waxaan dul fadhiyay wax kabadan hal jeer markaan gaariga fuulay oo uusan milimitir qaloocin, taasi waa hadii aan sifiican ugu ilaaliyo daboolka iskudhafka ringke iyo muraayadda shaashadda shaashadda ah.
Waxaan iibsaday iphone 6 iyo marar badan markaan guriga lajoogo wifi ... Dhib malahan ... Laakiin hadaan guriga ka tago ... waa inaan ka joojiyaa oo dhaqaajiyaa xogta mobilada si 3g ama 4g ay si fiican u shaqeeyaan.
Tani way i jajabisaa…. Marka la eego qiimaha kooxda
Jawaab ku sii Daniel Moreno
Tani waa markii seddexaad ee aan dib u soo celiyo iPhone 6-kayga (Nafteyda). Waxaan u qaatay inaan damaanad qaado 3 kale oo aan dalbado bedel ama lacag celin, laakiin way soo celiyeen waxayna ii sheegeen inay durbaba shaqayso oo aysan rabin inay beddelaan. Sideen ku sameeyaa ??? Apple waa inay fiiro gaar ah siisaa, maadaama aynaan qarash gareynin 200Dlls terminal ... Waxay ku kacaysaa in ka badan 900Dlls, waxaan dib ugu laabanayaa Galaxy S5-kayga
Jawaab Arturo Glezca
galab wanaagsan qof ma i caawin karaa
Waxaan dhigay iPhone 6-kayga oo lagu daray 'resets' maxaa yeelay waan iibiyay waxayna ku sii jirtay shaashadda guriga oo leh astaanta tufaaxa mana aysan dib u bilaabin ama aysan sameynin wax ay ku sii sugnaatay there. ? Maxaan sameeyaa si aan dib ugu noqdo?
Hagaag, dhibaato ayaan qabaa markasta oo aan iibsado cod-dhawaaq, wuxuu u dhigaa cod ahaan, xitaa waxaa jira wax walba prefect, kaliya daqiiqado yar ka dib codka ayaa laga saaraa oo markuu i soo waco ayaa codka caadiga ah soo baxa laakiin codka ayaa la soo dallacayaa oo aanan ku helin iibsiyo la soo dejiyey ama la soo degsaday,
Carmen, wax badan ayey i caawisay, mahadsanid.
Dhibaatadaydu waxay tahay in inta aan shaqada kujiro ay kuxirantahay wifi-ka xafiiska, laakiin markii saacadaha shaqadayda ay idlaadaan kuma xirna internet-ka qorshaha iphone, ma garanayo sida loo xaliyo
Salaan, qofna ma i caawin karaa? Sideen u hagaajiyaa dhibaatada shaashadda la dheereeyay mana ii oggolaan doonto inaan furo ama damiyo iPhone 6 maadaama aysan ii oggoleyn inaan arko kumbuyuutarka. Mahadsanid habeen wanaagsan. By habka, Waxaan mar hore isku dayay in dheecaan batteriga iyo dib u buuxinta waxay dhaqaajineysaa shaashadda la kordhiyay mar kale.
MenDayaanna ( dijo
Hello Elias, isku day inaad sameyso DFU si aad ugu qasabto dib u bilaabida dhamaan howlaha, waxaan rajeynayaa inay tani kaa caawin doonto, aniga ayay xalisay dhibaatooyin badan.
Ujawaab Carmen Rodriguez (@carmenrferro)
Hello ELias, ma awoodday inaad xalliso dhibaatada? Isla waxaas oo kale ayaa igu dhaca iphone 6s cusub. = /
Jawab an Angeles Guidobono
Iphone 6 plus-kayga kumuu xidho macmahayga bluetooth, kaliya waxaan helaa xayeysiis koodh ah waana isku mid, waxaan siiyaa xiriiriye, laakiin ma aqaano waxaan sameeyo, qof ayaa iga caawin kara dhibaatadan.
Maxay tahay haddii aan haysto 895 sawir markii aan la tashanayo albamka "Dhammaan sawirrada" waxaan helayaa 1.975 markaan la tashanayo Sawirada ku jira Macluumaadka Dejinta?
wax cusub ma sheegaan
tan waxba ka tari mayso
Ku jawaab nandocell
Beryahan nasiib badan uma lihi manzanita. IPad Airku shaqadii wuu joojiyay, waxaan ku badalay Dukaan ku yaal Washington DC dhib badana igama qabin, laakiin iPhone 5s oo aan badalay isla maalintaas ka dib seddex bilood ka dib way joojisay shaqadii, waa uun markii dammaanaddii beddelku dhammaatay. MacBook Pro wuxuu si lama filaan ah u noqday kaarkeyga, ka soo horjeedka Hawada oo soo fiicnaanaya oo ka sii fiicnaaneysa. Hadda qoyska oo dhami waxay leeyihiin iPhone 6Plus oo laba maalmood ma dhaafaan taas oo aanan u baahnayn inaan ku qasbo dib u bilaabid. Maaha waxyaabo raqiis ah inay tan dhacdo. Waan jeclaa MacBookga imanaya inuu soo baxo, laakiin midka qaaliga ah hore ayuu u duugoobay oo xitaa ma laha adabtarada tunderbolt 2 (1 sidoo kale).
Way fiicnaan laheyd haddii degelku ka jawaabo waxyaalahan maxaa yeelay kuwa naga mid ah ee wax qoraya ayaa ah isticmaaleyaal, ma ahan farsamayaqaanno.
Caawinaad ahaan waxaan u baahanahay inaan tirtiro codsiyada warshadda ee
Taleefanka gacanta ee Iphone6 ​​ayaa markaa ii sheegay inay tahay inaan cusbooneysiiyo ️Ma waxaa lagu shubay shaashadda 1 app ee saacadda anigoo tirtiraya axuliooooo !! Caawinaad deg deg ah !! ☺️me
Waxay ka saarayaan xusuusta phone taleefanka gacanta 😔
Ku jawaab Ladybug
Hagaag, hadii ay kuxakameeyeen sida ay anfacaay ii ahayd inaan khariidadaha ku xiro gaariga anigoo gacmaha furan oo markii foomkaan cusub la dhigayo iska saara, sifiican haday markale dhigaan
Waad salaaman tahay, raali ahaw, dhibaato weyn ayaan qabaa, markii taleefankayga gacanta uu dillaaco wuu damiyaa oo ma sii shito, qof ayaa iga caawin kara waxa aan sameyn karo, ka sokow taas sida muuqata ikhtiyaarka Wi-Fi isna wuu xanniban yahay mana awoodo xitaa soo gal si aad u masaxdo dibna ugu laabo si aad u dhigto .. caawi fadlan!
Ku jawaab lulu perez
Habeen wanaagsan, ma xallin kartaa dhibaatadaas? Waxaan lahaa isla mid laakiin waa inaan u shidaa korontada cadaadisay iyo guriga isla waqtigaas
Waxaan hayaa taleefan iPhone ah oo aan ka iibsaday bishii Feebarwari 2015 bakhaarka Apple ee Panama. Maanta, 07-da Maajo, iyada oo lagu soo oogay dacwad buuxda, waxay si lama filaan ah u sii joogtay meyd mana shidin Maxaan sameeyaa?
Waxaan hayaa IPhone 6 Plus oo aan ka iibsaday Febraayo 2015 dukaan Apple ku yaal Panama. Maanta, 07-da Maajo, iyada oo lagu soo oogay dacwad buuxda, waxay si lama filaan ah u sii joogtay meyd mana shidin Maxaan sameeyaa?
Waad salaaman tihiin dhamaantiin !! 3aad iphone 6s oo wali dhiman, wax kayar laba bilood !!!
Markii aan u baxayo orod, oo taleefankayga gacanta ku duuban yahay, buluuguna xiran yahay ... markaan guriga imaado waa hagaagsan tahay. Si kedis ah ayuu u baxayaa, mana sii shidmayo mar dambe. Waxaan horeyba u badalay tan 1aad anigoo adeegsanaya labo bilood, tan labaadna usbuuc iyo mida sadexaad oo aan isticmaalayo 6 maalmood ... !!! Intaas waxaa sii dheer, Argentina malaha dukaan rasmi ah oo Apple ah, waa inaan sugaa qof socdaal ah oo ii sameeya raalli ahaanshaha inaan beddelo. Iphone dambe igama aha. ta saddexaadna waa soo jiidashada. Isbedelka nooca.
Ku soo jawaab Marcela Chediack
Subax wanaagsan, waxaan hayaa iPhone 6 oo taabashada shaashadda waxay umuuqataa wax walba inay noqdeen super super oo aysan ka jawaabin ama dib u bilaabin…. Xal ma jiraa?
Hagaag waxaan hayaa iPhone 6 waxaa jira waqtiyo uu daminayo oo kaliya hadii ay wali leedahay baytari buuxa waxaan rabaa inaan ogaado sababta ay kaligeed isu damiso waxaana jira waqtiyo aysan doonaynin inay sii shidato
Mahadsanid waxaan u baahanahay inaan ka ogaado waxaas oo dhan! Ha dhageysan dhaleeceynta kaliya ee kaa careysiineysa, Carmen dhibaato ayaan ku qabaa taleefankayga iPhone6 ​​ee fariinta I Message shaashadu waa kalabar siman iyo badh toosan mana saari karo, ma i caawin kartaa ama qof wax ka og iPhone 6 iyo faallooyinka halkan. Mahadsanid
Jawaab Patty G.
Markii shaashadda la ballaadhiyo waa sababta oo ah waxaad kicisay zoom, dhawr jeer ayay igu dhacday aniga. Waxaan ku xiraa kombiyuutarka iTunes ama sidaas ayaan u joojiyaa Zoon-ka
QOF MA I CAAWIN KARAA …… .. MARKII AAN SOO CELINAYO IPHONE-kayga 6 DIIWAANO AAN BILAABO HABKA SOO SAARIDKA KADIBNA AYAAN KU HELAY KELIYA MUUQA BARNAAMIJKA IYO BAARKA 10% SOO CELIYO WAA INTAAS OO AY KU JIRTO 2 MAALMOOD, WELI WAA WELI WAA BATTERY WAA LOO DHIIBAY GOOBTII LOOGU SOO DHAWEEYAY MARKII LAGU SOO CELIYAYNA, AYAY KU HAYSATAY ISKU MUUQAAL AH (OO LAGU SAMEEYAY MAGAALADA BARKA IYO BARKA 10% DIB U SOO SAAR
Jawaab JAVIER DUQUE
Javier, galab wanaagsan, isla waxbaa igu dhaca aniga iphone 6, jawaabtee ayaad heshay Mahadsanid.
Jawaab JAIRO CASADIEGOS LEAL
Isla waxbaa igu dhaca aniguna ma xallin karo)) =
ISKU KELIYA AYAY KU DHACDAY, MA AWOODAY IN AAD XALISO OO SIDEE? MAHADSANID
aifon 6 tangada yar
Jawaab Manuel Miguel
Waxaan haystay aifon 5 wayna igufiicneyd, waxaan iibsaday aifon 6 waxaana mudo bil kayar durba i siiyaa dhibaatooyin xaga caymiska ah markaan galo garrefur dadku waxay ku wacaan mobilada 100 euro.
Aniguna waxaan haystaa 700 oo euro ah oo aanan wici karin xayndaabka moobiilka oo waxaan jecel nahay gelipollas in aan lacagta ku bixino, waxaad u yeertaa appel ee ma ahan dacwad been ah sidaa darteed waad is ceebeysaa adiguna wali ma wici kartid garfur, iibso mobiil kale oo aan aifon
Waa salaaman tahay .. .. myiphone wuxuu shidaa shaashadda 5-tii ilbiriqsiba .. taasna waxay ka dhigtaa in batteriga uusan waxba ka badneyn maalintii, waa inaan qaadaa xeedho meel walba ah si aanan u sii joogin haddii ay lacag bixiso: (yaa garanaya haddii xal jiro ?
Jawaab Constanza Lillo
hello ... Dib ayaan u dhigay waxaanan damiyaa iphone waxaana ku haray astaanta tufaaxa
fadlan ka jawaab aniga ayaa i caawinaya
Ku jawaab niko
Ku jawaab Mariana demczuk
Gacaliye Carmen: Waan ku qanacsanahay faallooyinkaaga iyo talooyinkaaga ku saabsan iPhone 6, in kasta oo aanan soo bandhigin wax ka mid ah dhibaatooyinka aan kor ku soo xusnay, waxaan u arkaa inay tahay wax ku darsasho weyn oo noo oggolaaneysa inaan la wadaagno macluumaadka muhiimka u ah hawlgalka saxda ah ee qalabka. Fikradayda, ku saleysan khibradeyda shaqsiyadeed, waxaan aad ugu qanacsanahay waxqabadka qalabka oo aan u arko inuu yahay aalad shaqo oo aad u fiican isla markaana si cajaa'ib leh ula falgalaya dhammaan aaladaha farsamada ee nagu hareeraysan. IPhone 6 inkasta oo dib u eegisteeda taban ay tahay taleefoonada casriga ah ee ugu wanaagsan ee Apple ay suuqa ka soo saartay, waa mid aad wax ku ool u leh isla markaana leh cabbirka ugu habboon iyadoo la tixgelinayo qalabka ku jira aaladaha Android uu gabi ahaanba duugoobi doono. Mar labaad waxaan kuugu mahadcelinayaa waxtarka aad ka geysatey madasha iyo dadka aan wax dhiska aheyn, tusaale ahaan Damien. Waa inay lafaguraan asalka qoraalka halkii ay ka ahaan lahaayeen foomka. In kasta oo ay Carmen waxoogaa khaladaad qoraal ah lahayd, haddana macnaha weedhu weligiis ma lumo. Damien ma u maleynayaa inay tani dhab ahaan tahay tan ugu habboon?
Jawaab Pedro Pablo
Gacaliye Carmen, ama xubnaha golaha; Waxaan iibsaday iphone 6 usbuuc ka hor, waxaanan ogaaday wax aad ii dhibaya maadaama oo noocyada kale ee taleefanka gacanta aanan ku haysan dhibaatadan; Waxaan ku xiraa shabakada Wi-Fi, waan isticmaalaa laakiin markaan joojiyo isticmaalkeeda, waxay si otomaatig ah uga goysaa shabakada la sheegay, taasoo iga dhigeysa inaan ku xirnaado shabakada bixiyaha taleefankayga, si aan dib ugu xirnaana waa inaan aadaa goobaha shabakada oo aan gujiya shabakadda Wi-Fi ee aan keydiyay; runtu waxay tahay inay tahay wax dhib badan in la sameeyo hawshan markasta oo aan isku dayo inaan isticmaalo codsi kasta oo u baahan in lagu xidho.
Waxaan eegay ikhtiyaarrada WiFi si aan u arko haddii aan arko wax la yaab leh, laakiin waxba kama heli karo. Qof baa naxariis u yeelan lahaa inuu ka faaloodo khibradaha arrintan la xiriira. Mahadsanid.
Hello Damian. Ma isku dayday inaad isticmaasho sirta WPA? Waan kuu sheegi doonaa: Waan ogahay kiisas dhowr ah oo isla wax isku mid ah nagu dhacay oo xitaa ku dhacday aaladaha Android. Xaaladaha aan ogahay, oo leh WPA encryption, oo aan dhihi karno way ka xoog badan tahay, ma jirin wax dhibaato ah oo noocan ah. Tan waxaan kuugu sheegayaa maxaa yeelay ma garanayo waxa ku dhici kara taleefankaaga iPhone 6. Tan iyo markii aan bilaabay sir-gelinta ee WPA wax dhibaato ah ma qabin.
hello, waxaan hayaa iphone 6 3 maalmood kahor. Habeenkii ugu horreeyay ee aan lacag dhigo ayaa waxaan toosay maalinta xigta taleefankuna waa dhintay. Ma daarto dib looma soo celin karo Mana xeedho batteriga ama fiilada kumbuyuutarka kumataqaan aniga.
Dhibaato noocee ah ayey noqon kartaa? biinanka lacag bixinta, batteriga ama unuga ayaa dhintey?
Haye, waxaan hayaa iPhone 6 illaa iyo markii ugu dambeysay ee aan cusbooneysiiyey dhibaato ayaa i haysay. Waxaan u dhaqaajiyaa xogta moobiilka ee arjiga (xaaladdan YouTube) Waxaan ka baxayaa dejinta oo dib ayaan u soo galayaa oo barnaamijku uma shaqeynayo inuu ku isticmaalo shabakadda moobiilka. kaas oo aan kaliya ugu isticmaali karo youtube wifi.
Wax la mid ah ayaa igu dhaca aniga, kaliya Facebook aniga kama shaqeyn karo xogta moobiilka ee loogu talagalay codsigan
Ku jawaab Gera
Waxaan hayaa iPhone 4s waxaanan helay arji u diraya muusigga Bluetooth-ga gaadhigayga sameecadda, waxaan u malaynayaa inay fikrad fiican tahay oo waxaan u arkaa inay aad u anfacayso gaar ahaan buugaagta maqalka, waxa kaliya ee aan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii uu jiro mid kale ikhtiyaariga ah .. Codsiga waxaa la yiraahdaa Blue2car mana ka heli karo macluumaad badan oo ku saabsan, ma i caawin kartaa?
Sideen dib ugu bilaabi karaa iPhone-ka… .waxaana la xiray qaabka amaanka security .. ilaa iyo inta taleefanka la furay. . . . . . isii talo, ikhtiyaarro .xfa
Jawaab jairo ivan
Waa salaaman tahay, waxaan haystaa Iphone 6 waana uu ku dheggan yahay, waxba ma qaban karo, iima oggolaaneyso inaan dhigto sidoo kale, maxaan sameeyaa?
Waad salaaman tahay! Waxaan haystaa i phne 6 oo waxaan dhib ku qabaa helitaanka shabakadaha wifi. Waxaan si dhib leh u heli shabakadaha iyo kuwa aan ka helo waa kuwo aad u yar. Maxaa dhici kara? Horey ayaan dib ugu bilaabay wax walbo sida kor lagu sharaxay laakiin isla dhibaatadaas ayaa sii socota, ma dalban karaa damaanada? Waxaan ku jiraa gudaha ama inaan iibsado
Weligaa ha u samayn inaad dib u bilowdo taleefanka gacanta. Sababtoo ah hadhow ma shaqeyneyso waana inaad u qaadataa si aad u hagaajiso. Waxay ku raran tahay xoogaa reboot ama dib u soo celin ka dibna mar dambe ma shubanayso iyo wixii la mid ah. WELIGII HA KU SOO CELIN SIDAY KU TAHAY BOGGAN
Uia hada waan soo ceshay maxaa yeelay ma aanan ogeyn iminkana taasi waa igu dhaceysaa, waa la baaray, arinta waxay tahay waxaan ka imid Argentina oo halkan malaha App Store, fadlan qof yaqaana sida loo xaliyo.
hello, waxaan hayaa iPhone 6, si fiican ayey u shaqeyneysay si lama filaan ah ayeyna iigu dhegtay, iima ogola in aan shaashadda wax ka shaashado ama damiyo ... maxaan sameeyaa si aan u furo, waxaan u arkaa inay tahay dhibaato guud taleefannadan gacanta, laakiin ma aqriyo xalka,
Ku jawaab olga cubillos
Waad salaaman tahay! Waxaan hayaa taleefan-6 waana dhintay, maxaa dhici kara? Haddii qof i caawin karo, waan ku qanacsanahay.
Ku jawaab johanna
Maanta subaxdii waxaan iibsaday 50 megabyte oo boos ah oo ku yaal Icloud, waxay igu soo dureen xisaabteyda (habka, labanlaab wixii la daabacay: € 1,98 markii ay ku bixiyeen uu ahaa 0.99 50) laakiin sidoo kale ma haysto awood 5 mega ah laakiin XNUMXta ay bilaash ku bixiyaan. Ma leedahay wax dib u dhac ah oo laga bilaabo marka aad bixiso illaa lagugu abaalmariyo?
Waad salaaman tahay, dhibaato ayaan ku qabaa iPhone 6, waa gaabis oo xusuustaydu waxay ku dhowdahay vasia, qof ayaa i caawin kara
Ku jawaab abraham
Marmar, kamarada IPhone 6 taleefanka gacanta ayaa burbura, shaashaduna waa madow oo waxba ma shaqeeyaan, iskiis ayuu isu hagaajiyaa dhowr maalmood kadib. Fadlan haddii uu jiro qof garanaya waxa la sameeyo si taasi u dhacdo, ila soo socodsii. Mahadsanid. Hector
Waan saxaa, si aysan u dhicin
Sidee wax u socdaan
Ku jawaab Hipolito
Waa salaaman tahay, waxaan haystaa Iphone 6 Plus oo halyeey ayaa soo muuqday oo oranaya…. Fiiladaan ama qalabka lagu rakibo maahan shahaado, sidaa darteed waxaa laga yaabaa inaysan si sax ah ugu shaqeyn Iphone-kan this. laakiin waxaa ii soo baxday inaanan waxba ku xirnayn…. Waxaan qabaa dhibaatada ah inaanan dhageysan karin muusikada, farriimaha codka ee Wapps ama nooc kasta oo codad ah, kaliya wicitaanka, taas oo aan u arko inay hadleyso speaker laakiin ma aqaano sida loo kiciyo inta kale ... way fiicnayd
Waad salaaman tahay, dhibaatooyin ayaan ku qabaa IPhone-kayga, ka dib markii aan wacay daqiiqadaha shaashadda ka baxday, ma ahan taleefanka, tan iyo markii aad riixayso badhanka wareega hoose ee ilbiriqsiyo yar ayaa hawlgelinaya hawlgalka codka.
Mudanayaal, sidee ayaad u maleyneysaa inaan tan xallin karo?
Waxaan hayaa iPhone 6s dhibaato ayaanna ku qabaa dirista emayllada .. Iima oggolaan doonto .. Waan heli karaa laakiin ma dirin. Waxaan helayaa ikhtiyaar sheegaya in e-maylkeyga ama eraygayga sirta ahi khaldan yahay, mana aha. Sideen ku hagaajin karaa? Waxaan isku dayay inaan tirtiro emaylkeyga oo aan dib u dhigo wax xal ahna majiraan
Carmen: Waxaan rajaynayaa inaad i caawin kartid.Waan ku cusbahay tan. IPhone waxaan haystaa 6 lagu daray laakiin ma laha barnaamijka 3D sidoo kale kamaradu ma laha sawir toos ah ama tooshka hore. Ma heli karo mid ka mid ah xulashooyinkaas. ii sheeg sababta?
Jawaab Rossy Romero
Waad salaaman tihiin waxaan dib u siiyay iPhone 6-kayga shaashaduna way dansan tahay laakiin taleefanku wali wuu daaran yahay, wicitaano ayaa soo dhaca oo waan ka jawaabi karaa laakiin markii aan ku xiro kombuyuutarka wuxuu i weydiiyaa lambarka lambarka iyo in ka badan ama ka yar taabto shaashadda halka ay nambaradu ku yaalliin laakiin aan lahayn Unlock, maxaan sameyn karaa?
Waad salaaman tihiin, taleefankayga iphone 6 mar horaba waa markii labaad ee muuqaalku ka dhamaado, tani waxay ka dhigan tahay hadii wicitaanadu yimaadaan laakiin anigu kama jawaabi karo maxaa yeelay shaashadda ma daarna, ma dami karo, iwm haddii qof i caawin karo aad baan u qadarin lahaa
Waa salaaman tahay, maalin wanaagsan, waxaan haystaa iPhone 6 oo lagu daray oo tan iyo markii aan cusbooneysiiyay, waa la calaamadeeyay, waxay ku dhegan tahay shaashadda aprtuna waana inaan sugaa inta ay ka kaceyso, xal ma jiraa
isku mid! 🙁
Marcelo, isla waxbaa igu dhaca! 4G waa mid gaabis ah sidoo kale? Tan iyo markii ugu dambeysay ee cusbooneysiinta 2 ay gadaal u socoto, waa markii iigu horreysay ee aan dhibaato ku qabo sanado badan macruufka. Wuu kacayaa, Shaqooyin, maalmahan mid ka mid ah oo wuxuu gubi doonaa tooooddooo !!!
Markaan taleefanka kula hadlayo headset-ka Bluetooth-ga ah waan maqlaa laakiin ima maqlaan, maxaan sameeyaa?
Dhibaato ayaan ku qabaa iphone 5, waxaan xirtaa muusig youte aadna waan u dhagaystaa, laakiin hadaan dhegaha furaysto, muusig kaliya ayaa soo baxa laakiin codka ayaa soo baxa oo kaliya buuq, codka ayaa qoraya inay ii soo diraan lagumana maqlayo samaacadaha…. Kaliya markaan isticmaalo aaladda maqalka, ma shaqeyso… maxaan sameeyaa ?? ma i caawin kartaa?
Ku jawaab Mili
waa inaad iibsataa samaacado kale, way waxyeeloobeen.
Jawaab Manuel Alejandro Chacin Rodirguez
Dhibaatooyin ayaan ku qabaa dhalaalka wuxuu sii joogaa mugdi waxayna qaadataa waqti dheer in la soo celiyo dhalaalka waa iPhone 6s
Ku jawaab Roberto Becerril
CIISE DIARTE dijo
Habeen wanaagsan oo ka socda waqooyiga-bari ee Mexico kulan qaali ah,
Dhibaato wifi ayaan ku qabaa taleefankayga iPhone 6 ka dib markii aan cusbooneysiiyay xalay, kaliya waan ka fogaanayaa router-ka xoogaa wifi-ga ayaa lumay, waa mid dhexdhexaad ah oo xasilloon marka aan 1 mitir u jiro router. Waxaan sii wadi baaritaanka iyo waxba. Ma jiro xal cad wali ilaa laga sugayo cusbooneysiin cusub ama xitaa haddii aad ila wadaagi karto fikradaha qaarkood. Waxaan haystaa iphone 6 oo leh iOS 10.0.2 (ugu dambeeyay).
Waxaan marhore iskudayey dhamaan aasaasiga, dib udajinta adoo adeegsanaya dejinta, adoo adeegsanaya itunes, adoo adeegsanaya icloud iyo waxba !!! ….
wax fikrad ah ???????? '
marka hore, Mahadsanid.
Jawab ciise ciise
Dhammaantiin waad salaaman tihiin! Waxaan hayaa iPhone 6 shaashaduna ma shaqeyso, taasi waa, waxaan helaa fariimo, ogeysiisyo iyo wicitaano, laakiin iima ogola in aan ka jawaabo maxaa yeelay waxba ma muuqdaan, kaliya muuqaalkeyga weyn ee la balaadhiyay, ma dami karo ama ma furi karo , waxay ii ogolaaneysaa inaan hoos udhaco tabta oo aan arko ogeysiisyada, markii aan dooranayo mid waxay ii direysaa inaan furo taleefanka halkaasna mar dambe iima ogolaato inaan faro ku furo ama kumbuyuutarka kor ii saaro, ma jiraa qof og waxa dhacay? ama maxaan sameyn karaa? waa iska cadahay inaanan damin karin sidoo kale! Mahadsanid!!
Jawaab Juliana Garmendia
Nabade Marcos, waxaan qabaa dhibaato la mid ah tii aad ka faalootay. Waxaad awood u laheyd inaad hagaajiso waxaan haystaa dabayaaqadii 2015 Mac.
Waad salaaman tahay, subax wanaagsan, waxaan ubaahanahay inaan ogaado sababta iPhone 6 Plus uusan iigu oggolaanayn inaan galo codsiyadayda si kasta oo aan u taabto shaashadda, dalabku iima oggola inaan damiyo oo aan mar kale taabto si aan kor ugu qaado wax kasta Waqtiga aan taabto shaashadda si aan u dhigo lambarkayga sirta ah. ka tag waana inaan ku sameeyaa raadkeyga, qof ayaa iga caawin kara mahadsanid
Waad salaaman tihiin. Waxaan kucusub ahay golahan. Dhibaato ayaa i haysata: Kaadhkayga Aqoonsiga ee imanaya ayaa naafo noqday. Dhammaan wicitaanadu waxay ku yimaadaan sidii aan la aqoon. Markaad gasho aqoonsiga soo wacaha qaabeynta / soo socda, badhanka ayaa "hadhsan" umana oggolaanayo inaan dhaqaajiyo ama aan dhaqaajiyo. Sideen ku xallin karaa taas ?. Waan qadarin doonaa caawinta. Aliciya
Waxaan hayaa ipone 6 oo lagu daray 126 gb
Dhibaatada i haysata ayaa ah in shaashadu wali xiran tahay, waxaad ka bixi kartaa hal shaashad ilaa mid kale ama ma furi karo wax barnaamij ah.
xoogaa ka dib way shaqeysaa xoogaa kadibna way ku dhagtaa
Qof ma ii sheegi karaa dhibaatada aad leedahay
Subax wanaagsan, qof ma iga caawin karaa taleefankayga gacanta, shaashadda waan beddelay mana dhaafayso tufaaxa iyo markii uu softiweerku khalad i tuso, maxaan sameeyaa
Ku jawaab luisao acosta
My iPhone 6 Plus keligiis ayaa kantaroola
Fur codsi kasta ama wac wicitaano aniga oo aanan awoodin inaan xakameeyo
Waa inaan damiyaa daqiiqad kasta si aan uga fogaado wicitaanada, runta ayaaba igu daashay hee
Laakiin kaliya waxay igu keentaa dhibaatadan markaan ku qaato jeebkayga surwaalka, maahan midaas oo kale markii aan ku xiranayo jaakadeyda, laakiin inaan noqdo koox fiican ayaa wanaagsan.
Waa inaan u diraa si aan ugu hagaajiyo bakhaarka ku yaal Lima waa sida Apple ii sheegay
Ku jawaab Gregorio
Gacaliye, maxaa igu dhacaya aniga oo wata taleefankayga Iphone 6 waa in ay tahay in lagu dhejiyo modemka, si aan u yeesho calaamadda Wi-Fi, haddii aan ka fogaado modem-ka calaamadda ayaa iga luntay, waxaan isku dayay in aan dib u cusboonaysiiyo si kasta oo aan waliba akhri in qaabkani la yimid dhibaatooyin anteeno, maxaan samayn karaa?
Qofka qoray qoraalkan wali ma nool yahay? Waa inaad naftaada disho ama aad shaqada badasho.
Kadib cusbooneysiin ku saabsan iPhone 6-kayga oo lagu daray wifi iyo bluetooth-ga ma shaqeyneyn. Qof baa i caawiya fadlan.
Runtu waxay tahay in cusbooneysiintii ugu dambeysay ee IOS ay yihiin wax laga yaqyaqsoodo, waxaan si dhab ah uga fakarayaa inaan u wareego Android.
Waxaan dib udhac kuyimid qoraalkiina batteriga si kadis ah ayuu iidhacayaa hadaan kamarada adeegsanayana waxaad moodaa iyadoo sixirku uxiran yahay oo uusan soo laabanayn hadaanan kufurin oo aan aqoonsado inuu wali leeyahay batteri.
Tani waxay ku dhacday barnaamijka weyn ee IOS 11, waad ku mahadsan tahay runtii, in cusboonaysiinta IOS ay iga tagtay runtii xanaaq, sida quruxda badan ee ay iPhone ku jirtay daqiiqado kooban oo cusbooneysiintaas ah
Ku jawaab Edaurdo
Kaamirada ku jirta iPhone 6 Plus ma shaqeyneyso. Ma qaadi karo sawiro.
Ku jawaab Karla de Garcia
felipe xasan dijo
way u fiican tahay dhamaan taageerayaasha tufaaxa weyn ee dambiga, runta ayaa ah in macluumaadka aad isiisay aad ii anfacday, iphone 6 markiina markhaati ayuu ka ahaa xasilooni darada isku xirka fiilada …… .Waad mahadsantahay !!!
Ku jawaab felipe hassan
Waxaan haynaa in kabadan 100 isbedel oo udhaxeeya beta 2 iyo beta 3 ee iOS 11